Cambalache, chishandiso chekugadzira Gtk mushandisi nzvimbo | Linux Vakapindwa muropa
Cambalache, chishandiso chekugadzira Gtk mushandisi maficha
Munguva yeGUADEC 2021, dzakasiyana misoro yakapihwa zvinonakidza kwazvo izvo imwe yakabata pfungwa dzevakawanda yakanga iri itsva chishandiso chinokutendera iwe kuti ugadzire mushandisi maficha eGnome, zita rechishandiso ichi ndiCambalache.
Chinjanai yakamisikidzwa se chishandiso chitsva cheRAD chinogonesa kukurumidza kumberi-kumagumo kuvandudza kweGTK 3, GTK 4 uye iyo GNOME desktop nharaunda, kunyange ichinyanya kukoshesa iri paGtk 4 raibhurari. Inoshandisa iyo MVC paradigm uye uzivi hweiyo data modhi paradigm uye kuti imwe yemasiyano akakosha neGlade ndiko kutsigira kwekuchengetedza akawanda masisitimu emushandisi mune imwechete purojekiti.
Mugadziri wayo Juan Pablo Ugarte, akataura kupfuura chishandiso:
Yakatanga seyeti-ye-pfungwa dhata modhi yeGlade yaida kuyedza ese anopenga mazano andakave nawo kwemakore nezve iyo yakachena modhi inofanira kutaridzika.
Mwedzi mishoma gare gare ini ndaive neyakanaka dhata modhi iyo yaienderana neGObject yerudzi system zvakanaka chaizvo uye yaisavimba neGtkBuilder kana GObject.
Iyo yekuvandudza inotaura izvozvo nemodeli iwe yaunogona:
Kuunza uye kutumira kunze maUI akawanda kamwechete
Tsigira zviri nyore mabasa (hapana echinyakare ma tag) kubva kuGtkBuilder
Kavha / Dhizaini Zvivakwa
Dzorera / Dzorera zvakare
Kumanikidza uye kuunganidza nhoroondo mirairo
Saizvozvo Cambalache yakasununguka zvachose kubva kuGtkBuilder uye GObject, asi inopa dhata modhi inoenderana neGobject mhando system, ndosaka iyo modhi yedhata ichigona kuita zvakataurwa pamusoro, kupinza uye kutumira kunze nzvimbo dzakawanda panguva imwe chete, kutsigira zvinhu, zvivakwa, nezvimwe.
Pamusoro peizvi, inopa iyo cambalache-db chinoshandiswa kugadzira iyo modhi yedhata kubva kumafaira egir, uye iyo db-codegen yekushandisa inopihwa kuti ibudise GObject makirasi kubva kune data modhi tafura.
Kutsigira matavi mazhinji, iyo GTK yekudzidzira nzvimbo yekushandira inoitwa nerubatsiro rwe Broadway backend, ichikubvumidza iwe kutora mhedziso kubva kumaraibhurari eGTK muwebhu browser yewindo.
Maitiro makuru eCambalache anopihwa chinongedzo kuWebKit WebView, mairi, uchishandisa Broadway, kuburitswa kwemaitiro eMerengue kunoendeswa, rinova zita rehurongwa hunoshandiswa neCambalache iyo inobatanidzwa zvakananga kupa mushandisi mushandisi apo mushandisi achiigadzira, zvakajairika Gtk 3 kana Gtk application 4 zvinoenderana neshanduro yakatsanangurwa muchirongwa.
Pakupedzisira, kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo Unogona kutarisa ruzivo rwechirongwa Mune inotevera chinongedzo. Nepo kune avo vanofarira kugona kutarisa iyo Cambalache kodhi, vanogona kuzviita. kubva pane iyi link iripazasi. Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muPython uye inowanikwa pasi peGPLv2 rezinesi.
Kune avo vanofarira kugona kushanda nechishandiso ichi, vanofanirwa kuziva izvozvo Pane nzira mbiri dzekuve nazvo mune yako system, imwe yacho iri kurodha pasi kodhi kodhi yeCambalache uye iyo isingakodzere kumisikidza chishandiso, nepo imwe sarudzo uye iyo yandinofunga yakanyanya kugadzikana iri nerubatsiro rweFlatpak mapakeji. Izvo zvakakoshawo kutaura kuti zvakakosha kutaura kuti Python inofanira kuiswa.
Muchiitiko chekutanga uye izvo hazvidi kuisirwa kurodha pasi sosi kodhi yechombo. Izvi tinogona kuzviita kuvhura terminal uye mairi tichaenda kunyorera unotevera kuraira:
Zvino, kuti umhanye chishandiso, ingo nyora:
Chekupedzisira kana iri imwe nzira ndeyekuti ndizvo nerubatsiro rwePlppak mapakeji, Isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro kuti tikwanise kuisa iyi mhando yepakeji muchirongwa uye zvese zvatinofanirwa kuita ndeizvi vhura terminal uye unomhanya inotevera mirairo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Cambalache, chishandiso chekugadzira Gtk mushandisi maficha